I-Pingtung Fangliao Bean Fish B&B-ngaphakathi komgama wokuhamba kwisikhululo, vula ifestile ukonwabela umbono omkhulu wolwandle, iSikhululo se-Kenting Hualien Relay.
Fangliao Township, I-Taiwan
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlice
Singumqolo wokuqala wamagumbi azimeleyo kunxweme lolwandle ecaleni kweFangliao Fishing Port. Ukuhlala apha, unokuhlala kwibalcony kwaye umamele isandi samaza kwaye ubukele ukutshona kwelanga. Ebusuku, xa imozulu intle, usenako ukubona izibane zeXiaoliuqiu.
Ukuhamba nje yimizuzu esi-7 ukusuka kwisikhululo saseFangliao, kwaye zombini ulwandle kunye neFangliao Fishing Port zikumgama wokuhamba. Kukho i-Quanlian Supermarket ekufutshane, apho unokufumana zonke iintlobo zesnacks kwindawo yokutyela, kwaye imisebenzi yobomi ilula kakhulu. Igumbi lixhotyiswe ngekhitshi elula kunye nomatshini wokuhlamba, olungele ukuhlala kwakho kweentsuku ezininzi.
Indawo esihlala kuyo ayinazo izinto zodidi oluphezulu, kodwa sikukhathalele ukucoceka. Amashiti namashiti kufuneka acocwe ngalo lonke ixesha, kwaye imigangatho yangaphakathi kunye namagumbi okuhlambela nawo aya kucocwa kwaye abulawe iintsholongwane ngalo lonke ixesha.Ndiyathemba kuphela ukuba ungaphila kamnandi kwaye ulale kamnandi.
Nanjengoko umnumzana Shi emdala noko asizokwamkela iindwendwe ezifika zingena ngapha kwentsimbi yeshumi ngokuhlwa, singazamkeli neendwendwe ezingathethi isiTshayina, ndicela nindixolele.
Asikwamkeli ukuhlala okungaphezulu kwe-10 ebusuku, kwaye asamkeli iindwendwe ezingathethi isiTshayina.
Siyindlu ezimeleyo ehlala ngaselwandle, enamasango azimeleyo kunye nokusetyenziswa okuzimeleyo kwendawo yangaphakathi.
4.89 · Izimvo eziyi-148
Le yidolophu encinci yokuloba, wamkelekile ukuziva isimbo sechweba elincinci lokuloba.
Umbuki zindwendwe ngu- Alice